Osteoarthritis ( May, 2022 ) - Ministry of Health (MOH) Myanmar
အသက်ကြီးသူများတွင် ဖြစ်တတ်သော ဒူးနာခြင်း ( Osteoarthritis ) ( May, 2022 )
အဆစ်အမြစ်ရောင်ရောဂါတစ်မျိုး (osteoarthritis)ကို အသက်အရွယ်မရွေးခံစားရပေမယ့် ၊ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သူတွေမှာတော့ တော်ရုံမပျောက်ကင်းဘဲ စွဲစွဲမြဲမြဲ ဒုက္ခပေးနေတတ်တဲ့အိမ်မက်ဆိုး တစ်ခုဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
အဓိကကတော့ အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ အဆစ်တွေအပေါ် ဒဏ်တွေသက်ရောက်ပြီး ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းပါ။ ဒီလိုအဆစ်ရောင်ခြင်း (Degenerative joint disorder )ကို ပျက်စီးယိုယွင်းလာသော အဆစ် မူမမှန်ခြင်းလိုလဲခေါ်ကြပါသေးတယ်။
အသက်အရွယ်ရလာတဲ့အခါမှာ ဒူးဆစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ အရိုးတွေ (ပေါင်ရိုးနဲ့ခြေသလုံးရိုး)ပေါ်မှာဖုံးအုပ်ထားတဲ့ အရိုးနုတွေ ဒဏ်ဖြစ်ပြီး တဖြည်းဖြည်းပါးကာ အရိုး အချင်းချင်း ပွတ်တိုက်မိလာပါတယ်။
အဲဒီ့အခါ ဒူး အကွေးအဆန့် အထိုင်အထ ခက်လာပြီး ၊ တစ်ခါတရံ ရောင်ရမ်းနာကျင်ပြီး မလှုပ်မရှားနိုင်ထိဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒူးလှုပ်ရှားစေဖို့ ဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့ ကြွက်သားတွေလည်း အားနည်းလာတတ်ပါတယ်။
အဓိက အကြောင်းအရာဟာ အသက်ကြီးလာလို့ ပျက်စီးလာတာဖြစ်ပြီး ၊ လူတော်တော် များများဟာ တဖြည်းဖြည်းယိုယွင်းပျက်စီးလာမှုကို သတိမထားမိတတ်ကြပါဘူး။
ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်အချိန်မှာ ဒူးဆစ်ဒဏ်ရာ ရဖူးသူတွေ (ဥပမာ၊ ၊အားကစားပြင်းပြင်းထန်ထန် လှုပ်ရင်းဒဏ်ရာရဖူးသူ၊ ဒူးလှုပ်ရှားမှုအတွက် အရေးပါဆုံးအရွတ်Anterior cruciate ligament စုတ်ပြဲဒဏ်ရာရဖူးသူ၊ ဒူးဆစ်ထဲမှ အရိုးနု Meniscus ဒဏ်ရာရဖူးသူ)များဟာ အသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါ ဒူးဆစ်ရောင်ရမ်းနာကျင်ခြင်းကို ပိုကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။
အသက်ကြီးလာသူတိုင်း ခံစားရတယ်ဆိုပေမယ့် တစ်ခါတရံ လူလတ်ပိုင်းတွေမှာလဲ တွေ့ကြုံရတတ်ပါတယ်။
– မွေးရာပါ ဒူးဆစ် အနေအထားမမှန်ခြင်း(ခြေခွင်နေခြင်း၊ ဒူးဆစ်နေရာသာပူးကပ်နေခြင်း)
– ဒူးဆစ်ဒဏ်ရာ ရထားဖူးခြင်း
– ဒူးထောက်ပီး ဒူးဆစ်ပေါ်အားပြုလုပ်ရသော အလုပ်များကြာရှည်လုပ်ကိုင်ထားဖူးခြင်း
ပထမဆုံး ဒူးဆစ် တောင့်တင်း နာကျင်လာခြင်းကို တဖြေးဖြေး စတင်ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ့နောက်မှာတော့ ဒူးဆစ်တောင့်တင်းခြင်းကို နားနေစဥ်(အထူးသဖြင့် ခုံပေါ်မှာထိုင်ရက် ဒူးကို ဒေါင့်မှန်ကွေးထိုင်တာ ကြာလာချိန်)မှာ တစ်ဆင့်တိုး သိသာခံစားရနိုင်ပါတယ်။
– ကြာကြာလှုပ်ရှားလုပ်ကိုင်နေစဥ် နာကျင်လာခြင်း၊ ဥပမာ-လမ်းလျောက်ခြင်း၊ မတ်တပ်ရပ်ခြင်း၊squat(ထိုင်ထလေ့ကျင့်ခန်းကဲ့သို ထိုင်ခြင်း) ထိုင်ခြင်း၊ ဥယျာဥ်အလုပ်များ လုပ်ခြင်း၊ အိမ်အလုပ် များ(ဒူးထောက်၍ကြမ်းတိုက်ခြင်း) လုပ်ခြင်း
– လှေကားအတက်အဆင်း လုပ်ရာတွင်နာခြင်း
– ဒူးဆစ် ကွေးညွှတ်တဲ့အခါ ကြိတ်ဖိသံများ ထွက်ပေါ်လာခြင်း
– ဒူးဆစ်တစ်၀ိုက် ရောင်လာခြင်း
– လှုပ်ရှားသွားလာရာမှာ အလွန်အမင်း ခက်ခဲ နာကျင်မှုများခံစားလာရခြင်းနဲ့ ပုံမမှန်တဲ့ သွားလာ လှုပ်ရှားမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒူးဆစ်နာရောဂါကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများ
– နာကျင်ကိုက်ခဲ လမ်းလျှောက်ရခက်ခဲမှုတွေကလွဲရင် ကြီးကြီးမားမားနောက်ဆက်တွဲများမရှိပါဘူး။ ဒူးနာခံစားနေရသူအတော်များများဟာ ဂရုစိုက်နေထိုင်ရင် တစ်သက်တာ အဆင်ပြေပြေနေထိုင်နိုင်ပါသေးတယ်။
– အရေးကြီးတာကတော့ လှုပ်ရှားသွားလာမှုမနည်းအောင် ၊ ချော်လဲပြုတ်ကျခြင်း မဖြစ်အောင် အမြဲဂရုစိုက်ရပါမယ်။
ဒူးဆစ်ရောင်နာ ဖြစ်နေရင် ဘယ်လိုကုသရမလဲ
– အသက်အရွယ်ကြောင့်ဖြစ်တတ်တဲ့ ဒူးဆစ်ရောင်နာခြင်းအတွက် ထိရောက်သေချာတဲ့/အရှင်းအမြန်​ပျောက်ကင်းစေတဲ့ ကုသမှုမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘ၀တစ်လျှောက် အဆင်ပြေသက်သာစေဖို့နဲ့ အမှီအခိုကင်းမဲ့စွာ လှုပ်ရှားသွားလာနိုင်ဖို့ ပြုလုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေတော့ ရှိပါတယ်။
– အ၀မလွန်စေဖို့ ပုံမှန်သတိထား ထိန်းညှိခြင်းဟာ ဒူးဆစ်ပေါ်က ပျက်စီးယိုယွင်းစရာဒဏ်များကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
– လုံလောက်တဲ့ အနားယူခြင်းနဲ့ တတ်နိုင်သလောက် လေ့ကျင့်ခန်းတွေ ( ဥပမာ၊ ၊တုတ်ကောက်အကူနဲ့ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်းနဲ့ ရေကူးခြင်း) စတာတွေကို နေ့စဥ်ပုံမှန်သတိထား ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
( အထူးသတိပြုစေရန် – ဒူးဆစ်နာကျင်မှုကိုဖြစ်စေတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုတော့ လုံးဝရှောင်ကျဥ်ရပါမယ် )
– ဒူးဆစ်အနားမှာရှိတဲ့ ကြွက်သားတွေတောင့်တင်းခြင်းနဲ့ ဒူးဆစ်အကွေးအဆန့်ခက်ခဲတောင့်တင်းနေခြင်းအတွက် သက်သာစေတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေလည်း ရှိပါတယ်။
Quadriceps Exercise (ပေါင်ရှေ့ ကြွက်သားလှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခြင်း)ကို နေ့စဥ်ပုံမှန် ပြုလုပ်ခြင်းဟာ ဒူးဆစ်နာခြင်းအတွက်အကျိုးကျေးဇူးများစေပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ ပြန်လည်သန်စွမ်းရေးဆရာဝန် (Physiotherapist )နဲ့ပြသပြီး တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့တော့ လိုပါလိမ့်မယ်။
အပူအအေး ဘယ်နည်းလမ်းက ဒူးဆစ်နာခြင်းကို သက်သာစေသလဲ
ပူနွေးတဲ့ ထိတွေ့မှုကသာ ဒူးဆစ်နာတဲ့နေရာကို သက်သာစေပါတယ်။ ရေနွေးနဲ့ ရေချိုးခြင်း၊ ရေနွေး ပုလင်းကပ်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်အပူပေးစနစ်ပါသော စောင်များ နဲ့ ဒူးကိုပတ်ထားခြင်းတို့ဟာ ဒူးဆစ်နာခြင်း ဒူးဆစ်တောင့်တင်းနေခြင်းတို့ကို သက်သာစေပါတယ်။ အအေးကပ်ခြင်းကိုရှောင်ကျဥ်သင့်ပြီး ပူနွေးတဲ့ပစ္စည်းများအသုံးပြုရာမှာ အရေပြားအပူမလောင်စေဖို့ သတိပြုရပါမယ်။
• အပ်စိုက်ကုသခြင်းဟာ နာကျင်ခြင်းကို သက်သာစေကြောင်းနဲ့ သဘာ၀ထွက်ကုန်ပစ္စည်းမှ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Glucosamine ပါတဲ့ဆေးတွေဟာ ဒူးနာခြင်းကို အနည်းငယ်အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိမှုတွေအရ သက်သေပြုထားပါတယ်။
ဖိနပ်ခုံပျော့ထူထူနဲ့ တုတ်ကောက်တိုဟာ လမ်းလျောက်ရာမှာ ဒူးနာသက်သာစေဖို့ အထောက်အကူပြုပါတယ်။
အလွန်အမင်းနာကျင်လာခဲ့လျှင် Paracetamol ကို သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ မသက်သာရင်တော့ ဆရာ၀န်နဲ့ ပြသပေးပါ။
– ဆရာ၀န်နဲ့ လူနာအများစုဟာ ခွဲစိတ်ကုသမှုကို ရှောင်လွှဲဖို့ ကြိုးစားတတ်ကြပေမယ့် မခွဲစိတ်ဘဲ နာကျင်ခြင်းကို ဆက်ပြီးသည်းခံနေရင် မကောင်းပါဘူး။ နောက်ဆုံးပေါ် ဒူးဆစ်အစားထိုးခွဲစိတ်မှုဟာ အကောင်းဆုံးရလာဒ်တွေ ရနေပါတယ်။
– တစ်ကယ်လို့ ဒူးဆစ်ကွေးဆန့်တိုင်းအသံမည်ပြီး နာကျင်မှုကိုခံစားနေရခဲ့ရင်တော့ ဒူးဆစ် အစားထိုးခွဲစိတ်ခြင်းက အံ့မခန်းသက်သာမှု ကိုပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
Murtagh,J , 2016. Murtagh’s patient education. 6th Ed. Australia:Mcgraw-Hill Australia,pp.193